Xaaf oo ku gacanseyray Warqad ka soo baxday Safiirka Mareykanka – Radio Daljir
Xaaf oo ku gacanseyray Warqad ka soo baxday Safiirka Mareykanka
Febraayo 8, 2020 5:19 b 1
War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaalle Gelle Xaaf ayaa loogu jawaabay war qoraalka oo 5 Feberuary 2020 kasoo baxay Safaarada Mareykan ay ku leedahay Soomaaliya.
Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay faragalin ku heyso degaanada Galmudug,islamarkaana ay taageero u muujisay maamul lagu dhisay Afgambi.
Xaaf ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka in ay joojiso faragalinta ay ku heyso Soomaaliya, wuxuuna kasoo horjeestay baaq dhawaan kasoo baxay.
War kasoo baxay 5-tii Bishaan Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay dib u heshiisiin iyo wada shaqeyn dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Safaaradda ayaa ku boorisay dowladda Federaalka, dhammaan 5 Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Baarlamaanka, iyo saamileyda inay iska kaashadaan sugida amniga in la xaqiijiyo doorasho lagu kalsoonaan karo sanadka 2020/21.